I-Basecamp isungula iiTemplate zeProjekthi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2012 Douglas Karr
Uninzi lwezinto esizenzayo njengabathengisi ziphindaphindeka… ukusuka kuphando kunye nokubhala iposti yebhlog, kuphando kunye nokuyilwa kwe-infographic, ukuhlela nokupapasha ividiyo, ekuphuhliseni nasekwenzeni umkhankaso wentengiso. I-Basecamp isandula ukongezwa Izikhokelo zeProjekthi kwisicelo sayo.
Kwitemplate yeprojekthi, unokuseta abantu kunye nokwenza uluhlu lokuyinyusa iprojekthi ngokukhawuleza okukhulu.
Emva koko, ungaqala ngokulula iprojekthi ngokuvula itemplate yeprojekthi kwaye uyasebenza kwaye uyasebenza!
Sisebenzisa iBasecamp yonke imihla kunye nearhente yethu. Esona sixhobo sinye ndinqwenela ukuba sasinoluhlu lwezinto eziza kwenziwa apho sasinokubeka phambili kuzo zonke iiprojekthi kunokuba sisebenze ngaphakathi kwazo.
tags: BasecampiprojekthiItemplate yeprojekthi
Oktobha 10, 2012 ngo-4: 38 PM
Enkosi ngokwabelana noDoug! Oku bekukho kuhlobo lwakudala lweBasecamp,
kodwa kuvakala ngathi bakhupha nje ingxelo entsha. Ezizi
usebenzisa? Khange ndibone itoni yempendulo elungileyo kwinguqulelo entsha.